Sidee Ayay Ku Xalin Kartaa Barcelona Xanibaada Laga Saaray Suuqa Kala Iibsiga Muddo Sannad Ah? | Baarcadeeye
December 31, 2014 - Written by admin
Sports (Baarcadeeye)-Maxkamada Isboortiga ayaa shalayto soo diiday racfaankii ay Barcelona ka qaadatay ganaaxii FIFA ay ku soo rogtay ee ay kaga mamnuucday inay wax soo iibsato labo suuqa kala iibsi, waxaana ay taasi ka dhigtay in Barcelona ay wajahdo xaalad aysan hore qibrad ugu soo yeelanin, waxaana isku dayi doonaan ianay kooxdooda haagajiyaan ilaa iyo inta laga gaarayo Janaayo 2016 markaasoo xayiraada suuqa kala iibsiga laga qaadayo.
Mid ayaa run ah in lacagtii 100ka milyan euro ee ay qarashgareeyeen xagaagii markii hakad la geliyay ganaaxooda madaama ay racfaan qaateen loo sameeyay iyadoo arintaan maskaxda lagu ah, laakiin booska daafaca midig ayaa weli ah mid walaac ay ka qabaan islamarkaana ay jeclaan lahaayeen inay ciyaaryahan u soo iibsadaan, halka Thomas Vermaelen uu muddo bilo ah u jiro inuu safto kulankiisii ugu horeysay.
Iyadoo intaas maanka lagu hayo Barcelona ayaa xalad u arki karta da’ yarteeda sida Denis Suarez iyo Gerard Deulofeu oo amaah ku jooga Sevilla. Waxa ay sidoo kale ku qasbanaanayaan inay qandaraas cusub u soo bandhigaan Dani Alves, inay ceshtaan Martin Montoya islamarkaana ay fursad siiyaan xiddigaha da’da yar sida Adama Traore, Sergi Samper, Sandro iyo Munir El Haddadi.
Barca hubaal ayay u tahay in Deulofeu oo haatan ka hoos shaqeynaya Unai Emery uu soo laaban doono xagaaga danbe, laakiin xalaada Denis Suarez waa mid yara adag. Xiddiga khadka dhexe waxa uu amaah ku maqan yahay labo xilli ciyaareed haddii Barca ay dooneyso inuu xilli hore soo laabto waa inay heshiis kale la gaaraan Sevilal taasoo la micno noqon karta in xiddigo kale oo yaryar amaah uga tagaan Barce.
Sidoo kalena ma sahlanaan doonto inay ceshtaan Alves kaasoo qandaraaskiisa uu dhacayo June 2015, waxaana uu dalabyo qaali ah ka heli doonaa kooxaha waa weyn ee Yurub. Montoya ayaa isna doonayay inuu baxo in muddo ah madaama aan la ciyaarsiinin muddo badan waana adkaan doontaa in maankiisa la bedelo.
Waxa ugu macquulsan ayaa ah in lagu tiirsanaado da’ yarta Barca B sida Samper, Adama, Munir, Edger le iyo Alen Halilovic. Dhamaantood waxa ay awood u leeyihiin inay caawiyaan kooxda koowaad, sidoo kalna tababare Luis Enrique kama cabsado inuu aamino da’ yarta.
Xaqiiqdiina waxa xayiraada suuqa kala iibsiga nasiib weyn u noqon kartaa mid ka mid ah da’ yartaan haddii uu isa soo bandhigo 2015.